Tokony ho 1600 Ariary no vidin'ny kilaon'ny vary - Madagascar Informations
Ny vary Capitaine izay stock no amidy amin’ny vidiny 1400 ar eto amin’ny tsenan’Anosibe saingy vitsy no mpivarotra azy izany hoe 7 alina Ar ny gony amin’io vary mora io izay tsy dia tsara kalitao .
Tafakatra 2140 Ar hatraminy 2300 Ar kosa ny kilaony vary tsara kalitao toy ny Makalioka ,ny vary gasy mena ,fotsy ary ny mavokely eo ihany koa ny semence ,ny tsipala ary ny vary kongo .
Raha tsiahivina dia teo amin’ny 800 ar ny kilaony vary gasy ny taona 2004, 850 ar kosa ny Makalioka.
Raha jerena anefa ny Baril ny Pétrole tamin’ny taona 2004 dia teo amin’ny 53 dollars
50 dollars kosa amin’izao fotoana izao kanefa dia midangana izay tsy izy ny vidim-piainana.
Ny sandam-bola Malagasy dia 1800 Ar ny 1$ t@ izany ary @ izao fotoana izao dia 3000 Ar ny 1$. Nidina 67% ny sandam-bola Malagasy izany tao anatin’izay vanim-potoana izay. Ny vary dia niakatra 175% ny vidiny tao anatin’izay fotoana 2004-2017 izay.
Ny entana hafarana avy any ivelany hatrany no nanatombo raha mitaha @ ny entana nahondrana. Ary ny vary nafarana anefa isan-taona tao anatin’ireo elanelam-potoana ireo dia 200 000 tonnes isan-taona foana.
Koa manoloana izany rehetra izany inona ny tena zava-misy satria ny fiakarany Baril ny Pétrole sy ny sandam-bola Malagasy foana hatramin’izay no fialana olan’ny fanjakana . Raha tsy izany dia ny tsy fisian’ny orana na ny fisian’ny andro ratsy no lazaina fa fototry ny tsy fahampiam-bary na dia efa mba nisy aza ny famokarana manaraka fomba mivoatra mampiakatra vary mihoatra ny 3T isaky ny ha. Tsy hafahafa ve izany rehetra izany?
Ny tena loza aza dia vao tsy nilatsaka ny orana t@ herintaona ohatra dia niakatra ny vidim-bary kanefa vary efa any an-tsompitra.
Raha lazaina fa avy @ vidin-tsolika no mahatonga ny fiakaran’ny vidin’entana noho ny fitaterana lafo dia ankoatry ny vidin’ny solika iraisam-pirenena voalaza etsy ambony izay mazava fa tsy any ny olana dia ampahatsiahivina koa fa 1545 Ar ny litatry ny Gazoala t@ izany 2004 izany ary 3080 Ar/L izany amin’izao 2017 izao izay mbola niakatra ho 3170 Ar/L aza izao fiantombohan’ny Novambra 2017 izao. Izany hoe 105% ny fiakarana. Raha misy dia misy izany dia tokony ho 1600 Ar eo no tokony ho vidim-bary io raha lafo indrindra.
Dia mbola hanantena inona izany isika Malagasy hampiakatra io sandam-bola io mba hampidina ny vidin-javatra tsy mitsahatra miakatra io?
Tsy ny vidin’ny solika iraisam-pirenena aloha izany no mampiakatra azy
Tsy ny sandam-bola Malagasy izay midina foana koa no nampiakatra ny vidim-bary
Fa dia tena fanararaotana tsotra izao no ataon’ny mpandraharahan’ny vary eto amintsika izay mety koa mitsikombakomba @ mpiasam-panjakana mikirakira io sehatra io. Mila vahaolana hentitra mahakasika ny mpanelanelana dia ny fanafoanana izany fa tonga dia mpamboly mandalo koperativan’izy ireo mivarotra @ ireo mpamongady na mpaninjara mivantana no tokony atao. Izy ireo ihany no mifampiraharaha mivantana @ mpitatitra.
Amporisihina na terena mihitsy ny famokarana 5T/ha ka ny teknisiana Malagasy np vohizina anaparitaka ny fomba famokarana azy
Tokony ho ferana ny entana hafarana avy any ivelany mitaha @ entana ahondrana. Tena tsy mety vita ve izany?
Rehefa tsy ho vita izany dia ny fanafoanana ny MID ihany izany sisa no vahaolana ary ampiakarina 100% ny sandam-bola Malagasy. Ampiarahina @ fepetra hentitra momba ny fanondranana sy fanafarana entana io mba hifandanja tsara hitongilana aty @ fanondranana ny mizana ara-toekarena.
Ireo vary lazaina fa mora asehonay @ sary eto ambany izay nalaina teny @ tsenan’Anosibe ny 31 Oktobra teo dia misy karazany dimy (05):
Ny THAILAND dia 2000 Ar/kg izay mba tsara ihany fa toy ny Riz de luxe
Ny BOOM no manarakaraka mba tsaratsara ihany koa dia 1580 Ar/kg
Ny HORSE dia 1510 Ar/kg
Ny FANORONA dia 1500 Ar/kg
Ny CAPITAINE dia 1400 Ar/kg dia misy tokoa fa ratsy ny endriny ety ivelany
Ny tsapa sy hita dia iray ihany no mpivarotra io CAPITAINE io kanefa dia mbola hita ho misy foana io vary io fa tsy dia mahasarika olona loatra. Aleon’ny olona maka ireo karazam-bary mora hafa nafarana voalaza etsy ambony na lafo kokoa aza kanefa tsaratsara kokoa. Ireo indray dia saika ahitana azy ireo mpivarotra rehetra.
Voamarika koa fa somary tsy te-hanome vaovao mahakasika ireo vary ireo ny mpivarotra fa hoatran’ny matahotra izany.
Misy ny PCP Riz na Plateforme de Concertation et de Pilotage de la filière Riz efa nitsangana tany @ taona 2005 tany ivondronan’ny mpamboly sy ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ary ny fanjakana izay nisy fanohanana ihany avy @ mpiara-miombon’antoka samihafa fa tsy hita izay vokatra azo taminy fa dia mbola izao iaraha-mahita izao ny olana. Io ihany anefa no ezahina hitadiavana ny vahaolana @ alalan’ny fomba fiasa tsara sy mahomby kokoa @ izao ho avy manaraka izao satria efa hita ny lesoka sy izay tsapa fa tsy nampahomby izay natao. Hanara-maso akaiky kokoa moa @ izao manaraka izao ny mpanjifa ka dia ho hitantsika eo ny vokany.
President National FIMZOMPAM
← PRM-Maires de SOFIA / CFM
Lehilahy manameloka ny herisetra antoky ny fampandrosoana . →
Le riz hybride, cultivé avec succès à la Vitrine d’Iavoloha
16 mai 2017 Madagascar Informations 0